Gawaarida AMISOM oo laga baqayo in loo adeegsado weerar Al-shabab ku qaadaan Garoonka Aadan Cadde – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Nov 9, 2017
Shaqada Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde iyo guud ahaan Xerada Xalane ee Saldhigga ugu weyn AMISOM ayaa hakad ku jirta,waxaana laga baqayaa weerarro ay Al-shabab ka geystaan gudaha Garoonka Aadan Cadde.
Xog la helay ayaa muujinaysa in Labo ka mid ah Gaadiidka AMISOM ee horay Al-shabaab uga qaateen Ciidamada AMISOM la qorsheynayo in weerarkaas lagu geysto.
Sidoo kale waxaa hakad la geliyay ku dhawaad 700 Shaqaale si kmg ah uga shaqeynayay Garoonka Aadan Cadde, Xerada Xalane iyo Turkiga,kuwaas oo la tuhmayo in ay ku jireen Rag dagaallama.
Warbixintu waxay xuseysaa in 15 ka mid ah Shaqaalahaas loogu talagalay in ay weerar toos ah ka fuliyaan gudaha Garoonka iyo Xerada Xalane marka Gaadiidka Al-shabaab ka qaateen AMISOM ay ku qarxaan gudaha Xerada Xalane.
Sidoo kale waxaa la joojiyay guud ahaan Gaadiidka waaweyn ee dhismaha sida kuwa dhagxaanta iyo Carrada geyn jiray Garoonka Aadan Cadde.
Saraakiil ka mid ah shaqaalaha Garoonka ayaa u sheegay HornAfrik in cabsida ka taagan Garoonka Aadan cadde ay sababtay in 4tii Malmood ee la soo dhaafay uusan jirin dhaq dhaqaaq buuran.
Wxaaana walaaca ugu badan ee taagan uu yahay Gaadiidka AMISOM ee laga baqayo in ay qarxaan iyo 15 qof ee la tuhmayo in ay ka tirsanyihiin Shaqaalaha KMG ah kuwaas oo xogtu xuseyso in ay gudaha ka dagaallamayaan.
Mareykanka ayaa dhawaan digniin ka soo saaray Muqdisho,waxaana uu muwaaddiniintiisa uga digay in ay ku sii negaadaan Magaalada Muqdisho, kaddib markii safaaraddooda Nairobi heshay hanjabaad u gaar ah muwaaddiniinta Mareykanka.
Sidoo kale Qaramada Midoobey ayaa shaqaalaheeda Garoonka Aadan cadde uga digtay in ay banaanka u baxaan ama tagaan meelaha dadku ku badanyahay,waxaana ay kula taliyeen in ay jirto khatar dhinaca amniga ah loona baahanyahay in la is xakameeyo.
Gudaha Garoonka Aadan Cadde ayeey shaqada caadi tahay,waxaase banaanka hore ee Garoonka lagu arkayaa Ciidamo dheeraad ah, kuwaas oo gaadiidka u diidaya in ay galaan gudaha.